Goolhaye.com | Archive | France
Fransiiska oo qarka u saaran inay ka haraan koobka aduunka iyo dhibka haysta oo faah-faahsan
Home » Archives by category » Horyalaada » France
Posted on November 19, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Maxaa Cusub
Xulka Fransiiska ayaa laga doonayaa inay ku badiyaan in ka badan labo gool isla markaana aan wax goolal ah laga dhalin waana qaabka kaliya ay ugu soo bixi karaan koobka aduunka kulanka ay caawa ku marti galin doonaan Stade de france ee ku yaal Paris qaranka Ukraine. Lugtii hore ayaa…
Heshiis dhamaaday: Monaco oo keensatay goolhayaha Sampadoria Sergio Romero
Posted on August 17, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Maxaa Cusub
Monaco ayaa la soo wareegtay goolhayaha kooxda Sampdoria Sergio Romero hal sano oo dayn ah. Kooxda ku soo biirtay horyaalka Fransiiska ayaa ku qanacsan inay keensadaan goolhaye kooxda intaan suuqa la xirin, Ayagoo keensaday goolhayahan u dhashay wadanka Argentina. Kooxdan ayaa waayadaanba lala xiriirinayay goolhayaha Barcelona Victor Valdes, Inkastoo ay…
PSG oo bar-baro gashay kulankeedii u horeeyay ee Horyaalka Fransiiska
Posted on August 10, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Maxaa Cusub
Montpellier ayaa bar-baro la gashay Paris Saint-German 1-1kulankii u horeeyay ee horyaalka Fransiiska. Montpellier ayaa ku ciyaaraysay 20-daqiiqo ee cayaarta u dambeysay 10-ciyaartoy ayagoo difaac ku aruuray si ay isaga caabiyaan weerarada kooxda horyaalka Fransiiska difaacanaysa. kooxda martida loo yahay ayaa hogaanka ciyaarta qabatay ka dib markii uu Remy Cabella…
Edison Cavani ayaa fariin mahadcelin ah ugu soo qoray taageerihisii hore jaraa’id
Posted on August 9, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Maxaa Cusub
Gool dhaliyaha cusub ee PSG Edinson Cavani ayaa u soo jeediyay mahadcelin taagerihisi hore ee kooxda Napoli asagoo ugu soo bandhigay fariintisa jaraaid wax lagu xayeeysiiyo. 26 jirkaan oo mar lagu sheegay inay doonayeen kooxaha Real iyo Chelsea,ayaa ugu wareegay kooxda PSG lacag qaali ah. Siduu ugu mahad celiyo kooxdisi…
Hor u dhaca kulanka caawa bilaabmaya ee horyaalka Fransiiska Montepellier vs PSG
Posted on August 9, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Horyalaada, Maxaa Cusub
Paris Saint-Germain ayaa ku bilaabi doonta horyaalka Fransiiska kulan ay caawa la leeyihiin kooxd Montepellier. Kooxda difaacanaysa horyaalka Fransiiska PSG ayaa macalin cusub uu doorteen Laurent Blanca ka dib markii uu Carlo Ancelotti ku biiray Real Madrid. Parisian ayaa ku guulaystay koobkoodii u horeeyay xagaagan sabtidii markii ay Bordeaux ka…
Cavani oo ka dagay Paris maantanan u maraya tijaabo caafimaad kooxda PSG
Posted on July 15, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Maxaa Cusub
Gooldhaliyah kooxda Napoli Edinson Cavani ayaa saakay ka dagay ga-gida diyaaradaha ee Paris asagoo tijaabo caafimaad u maraya kooxda PSG. Cavani ayaa la gaynayaa Pitie-Salpetriero hospital halkaas oo uu ku mari doono baaris caafimaad asagoo markaas ka dib heshiiska saxiixi doona. Cavani ayaa soo gaba-gabeyn doona heshiis shan sano ah…
War eg-deg ah: France oo ku guulaysatay koobka aduunka ee dhalinyarada dadoodu ka yar tahay 20-jirka
Posted on July 14, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France, Maxaa Cusub
France ayaa ku guulaysatay koobka aduunka ee dhalinyarada dadoodu ka yar tahay 20-jirka markoodii u horeysay intii uu koobkan socday oo ah 36-sano ka dib markii ay ku garaaceen Uruguay gool ku laad 4-1. Labada kooxood ayaa u suuro galin in wax goolal ah iska dhaliyaan 120-daqiiqo oo ciyaartu socotay…
Maareeyaha kooxda PSG Leonardo oo iska casilay shaqadii uu u hayay kooxdiisa
Posted on July 10, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, France
Agaasimaha kooxda kubada cagta ee PSG leonardo ayaa iska casilay shaqadii uu u hayay kooxda PSG. Braziliankan ayaa xiriirka kubada cagta fransiisku ay ganaaxeen 13-bilood ka dib markii uu Garsoore tuuray xili ciyaareedkii dhamaaday. PSG ayaa ku sheegtay shabakadeeda in Leonardo uu shaqadii uu kooxda u hayay iska casilay ayagoo…
Bacary Sagna” PSG Iyo Monaco Dalabkooda Ma`Aanan Diidin “
Posted on May 5, 2013'); ?> by goolhaye and saved under England, France, Germany, Maxaa Cusub
Daafaca madaxa adag ee kooxda arsenal Bacary Sagna ayaa beeniyay in codsiyo uu ka helay kooxaha reer France ee PSG iyo Monaco kuwaasi oo doonaya in saxiixiisa helaan xilli ciyaareedka dambe . Waxaa la shaaciyay dhawaan in Bacary Sagna uu ka huleelayo kooxda ka dib markii qilaaf uu ka dhex…
Mathieu Debuchy oo caafimaadka umaray Newcastle
Posted on January 3, 2013'); ?> by goolhaye and saved under England, France, Maxaa Cusub, Suuqa
Daaficii kooxda Lille Mathieu Debuchy ayaa caafimadka umaray kooxda Newcastle ee wadanka Ingriiska iyadoo uu ka soo muuqday kulankii xalay ee kooxdiisu la ciyaartay kooxda Everton. Ninkaan ayaa ka soo guuray France waxaana uu dawanayay kulankii xalay dhamaadkii ciyaarta ayuuna macalinka Newcastle Alan Pardew xaqiijiyay in ay soo iibsadeen xidiga…
- Powered by WordPress - Designed by goolhaye Realtime website tracking